China Hollow Microsphere Cenosphere ho an'ny orinasa fitrandrahana solika sy mpamatsy | Huabang
Cenosphere Microsphere Hollow ho an'ny fandavahana solika
Cenosphere (vakana mitsingevana) dia karazana baolina lavalava lavenona izay afaka mitsingevana eny ambonin'ny rano. Fotsy volondavenona izy io, manify ary poakaty ary maivana. Ny lanjan'ny boky dia 720kg / m3 (lanja mavesatra), 418.8kg / m3 (lanja maivana), ny haben'ny sombin-javatra dia manodidina ny 0.1mm, mihidy sy malefaka ny tavany, ny conductivity mafana dia kely, ary ny fanoherana ny afo dia ≥ 1610 ℃. Izy io dia fitaovana refractory tsara mitazona hafanana, be mpampiasa amin'ny famokarana castable maivana sy fandavahana solika.
Ny firafitry ny simika ny Cenosphere(vakana mitsingevana) dia silica sy aliminioma oxide indrindra, izay manana toetra maro toy ny potikely tsara, poakaty, lanjany maivana, tanjaka avo, fanoherana ny hafanana, fanoherana ny hafanana, insulation, insulation ary lelafo. Izy io dia iray amin'ireo akora ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny afo.
Habe: 60-200 mesh
1. Ho an'ny fitaovana insulation mahatohitra afo
2. Haingo trano, rarivato avo lenta, tafo tsy tantera-drano sy fanasivanana mafana, injeniera amin'ny lalana, asfalta novaina, sns;
3. Ny indostrian'ny solika: famenoana tanim-boaloboka, fantsona manohitra ny harafesina sy fitehirizana hafanana, sahan-tsolika ambanin'ny ranomasina, fitaovana mitsingevana, mpanangona fotaka fandotoana solika, fantsona fandefasana solika sy entona, sns.
4. Plastika fampahavitrihana filler, mari-pana ambony sy ny tsindry insulator, sns;
5. Ny loko, ny ranomainty, ny adhesive, ny loko mangalatra, ny loko insulate, ny loko anticorrosive, ny loko gorodona, ny loko mahatohitra ny hafanana avo, ny loko amin'ny rindrina anatiny sy ivelany, ny loko insulation mafana, ny loko gorodona, ny putty fiara, ny lavenona atomika, sns;
6. Fiara fiara, tontonana fitaovana, akorandriaka kojakoja an-trano, mpankafy, mpandahateny, fantson-jiro lehibe, fanariana, fitaovana, rafitra, zipper, sodina, takelaka, sns;
7. Ny karazana vokatra FRP rehetra, marbra artifisialy, sambo FRP, asa tanana, sns;
8. Transformer famenoana sy famehezana fitaovana, fitaovana elektronika fonosana, sns;
9. Ny metaly foam dia vita amin'ny metaly maivana toy ny alimo sy magnesium. Raha ampitahaina amin'ny firaka matrix, ny fitaovana mitambatra dia manana ny toetran'ny hakitroky ambany, ny tanjaka manokana avo lenta ary ny henjana avo, ny fananan'ny damping tsara ary ny fanoherana ny akanjo.
teo aloha: Bentonite organika
Manaraka: vovoka barita